Ndụ kachasị mma nke nwoke nwere mmasị nwoke na Bangkok | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Bangkok, Oge ntụrụndụ, Tailandia, Asia njem
Bangkok ọ bụ isi obodo ThailandMba nke ọtụtụ ndị njem na-ewere dị ka otu n'ime ebe kachasị mma na Asia ma a bịa n'ihe abụọ: ụsọ osimiri dị egwu na ndụ abalị.
Ọtụtụ ndị njem nleta na-ewere Bangkok dị ka ndị mecca nke nwoke nwere mmasị nwoke njem na Asia n'ihi na ha dị ọtụtụ Ogwe, saunas na ụlọ oriri na nkwari abalị nwoke nwere mmasị nwoke Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịga njem na ijikọta osimiri, njem nleta dị ọnụ ala (Thailand abụghị mba dị oke ọnụ), o doro anya na ọdịbendị na ndụ abalị Bangkok yiri ka ọ bụ nke mbụ na ụzọ ahụ.
Ihe odida obodo na-eme obodo na obodo na-eme ka ọdịdị ala. Bangkok Ọ dị na ndagwurugwu nke Osimiri Chao Phraya, n’etiti obodo ahu, ma ihe dika nde mmadu abuo bi na ya ma na mpaghara ime obodo a di okpukpu abuo.
Ọ bụ ezie na ndozi ahụ bidoro na narị afọ nke XNUMX na ugha na narị afọ nke XNUMX ọ ghọrọ etiti nke ókèala ahụ, nke a na-akpọzi Siam, nnukwu imeziwanye obodo a mere na narị afọ nke XNUMX. Dị ka ọ na-adịkarị mgbe obodo na-etolite na nchịkwa ma ọ bụ oru ngo, nsonaazụ bụ ihe na-enweghị usoro, na ezughi oke ọrụ ọha na mara mma chaotic.
Ruo nwa oge ugbu a gọọmentị emejuputa ụfọdụ ndozi, tumadi na njem, mana enwere ọtụtụ mmadụ bi ọnụ, oke mkpọtụ, ọtụtụ ọkụ neon, na Bangkok ga-ama gị jijiji, agbanyeghị ee, echere m na n'abalị ọ ga-atọ gị ọchị nke ukwuu.
Ndụ abalị na Bangkok
Na Bangkok enwere ọtụtụ ụlọ mmanya, klọb na saunas na ọ bụ otu n'ime obodo kachasị mma n'ụwa na-apụ n'abalị n'ozuzu ya ma ọ bụ bụrụ nwoke idina nwoke. Bangkok na-ebi ndụ mgbe ama ama ama dị ka anụ ọhịa mana ekwesịrị ikwu na ọ bụghịzi ka ọ dịbu n'ihi na n'afọ ndị na-adịbeghị anya gọọmentị etinyela olu na ịgbaso ụfọdụ iwu iji chịkwaa ọgwụ ọjọọ, ịgba ọtọ, usoro ihe omume na ihe ndị ọzọ.
Taa ọtụtụ n'ime Ogwe, discos na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ ga-emechi tupu 1am a na-ahapụkwa ụfọdụ ka ha gafee elekere abụọ nke ụtụtụ. Ogwe ndị ọzọ na-adịghị mma na-emeghe abalị niile, ee, mana ọ bụghị nke ahaziri ahazi. Dị ka ndị njem nleta anyị ga na-ebu paspọtụ gị mgbe niile n'ihi na ndị uwe ojii nwere ike ịrịọ maka ya ma ọ bụ banye n'ụlọ mmanya ma ọ bụ disko, gbanye ọkụ, jụọ maka akwụkwọ yana ọbụlagodi nyocha ọgwụ. Ọ bụghị mgbe niile, ọ bụghị mgbe niile, mana ọ nwere ike ime.
Mbugharị, etiti nke ndu nwoke na nwanyi, kwusi na Silom. Obodo ọ bụla nwere ebe a na-edina ụdị onwe ya, ma ebe ọ bụla bụ Silom. Ihe niile. N’okporo ámá Silom, ị hụrụ ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, Ogwe, okomoko hotels, towering skyscrapers na ọtụtụ narị ụlọ ahịa n'okporo ámá ndị na-etinye uche ọtụtụ ndị obodo na ndị mba ọzọ.
Lọ a na-ere ntakịrị ihe niile, site na uwe ruo na nri, na ọnụ ala dị ọnụ ala. Ọ bụghị na ebe a dum bụ nwoke nwere mmasị nwoke n'ihi nke a, ị ga-ezo aka n'okporo ámá ndị bụ: Silom Soi 2, Soi 4 ​​na Soi Twilight.
Nke mbụ bụ ihe dị mfe alley na otutu ndi ozo, n'etiti ha ndị a ma ama karịa ha, ụlọ ọrụ DJ. N'ọnụ ụzọ, nke bụ n'efu, ha na-elele akpa akpa gị mana ihe dị mma bụ nke ahụ ọnụahịa bụ otu ihe na ụlọ mmanya niile Nwere ike ịga site na mmanya ruo n'ụlọ mmanya jiri iko aka n'agbanyeghị ebe ị zụrụ ya. Egwu ahu kariri mba uwa ma ndi mmadu egee ogwu. Enwere ndị mmadụ mgbe niile, ọ bụ ezie na ọ bụ karịa na ngwụsị izu.
Disko ị gaghị echefu bụ Ọdụ Dj. O nwere okpukpu ato ma enwere ngosi Dọrọ adaeze ya mere, ọ bụ ebe amaara n’obodo. Nwere ike iji BTS gaa Chong Nonsi Station ma ọ bụ Sala Daeng, ma ọ bụ ịnwere ike iji MRT gaa ọdụ Silom. N’ebe ahụ ka diski ga-esi pụọ ole na ole. Ọ na-emechikarị n’etiti 3 na 4 nke ụtụtụ. na nnabata dị ọnụ ala karịa ụbọchị izu, yana otu ihe ọ drinkụ drinkụ na-akwụghị ụgwọ, ma dị oke ọnụ na ngwụsị izu na mmanya abụọ.
Ndị a bụ ndị ọzọ ụlọ ịgba egwu abalị na Silom:
Lucifers Disko: ndị nwere mpi, egwu elektrọnik. Ọ na-emepe ụbọchị ọ bụla n’agbata elekere asaa nke anyasị na elekere abụọ nke ụtụtụ. Ntinye bụ n'efu.
Soi Thaniya: vibe ebe a bụ Japanese. Na Patpong enwere ọtụtụ ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọ Japaneseụ Japaneseụ Japanese mana ọ pụtaghị na ọ bụ ebe ndị Japan.
9 Night Club: ọ nwere ala atọ na ọtụtụ ndị mmadụ. Ọ nwere ihe ngosi mara mma na-adọrọ adọrọ. Ọ na-emepe kwa ụbọchị site na elekere asaa nke abalị.
Tapas: ọ bụ nwoke nwere mmasị nwoke ma ọ bụghị nwoke nwere mmasị nwoke.
A na-akpọ n'okporo ámá gay ọzọ Silom Soi 4, a n'okporo ámá dị mkpụmkpụ jupụtara Ogwe ndị nwere mmasị nwoke. Ọ dị mma ịnọdụ ala na mmanya na-ekiri ka ndị mmadụ na-agafe. Ihe ọchị na-agba n'etiti 9 elekere na 12 nke ụtụtụ ma ọ bụ ebe a na-ahụkarị ịmalite abalị tupu ị na-agba egwú. Ndị na-ekwo ekwo bụ Oghere Balcony the Thephone na ndị ọbịa.
Ogige ọkụ ọkụ na Bangkok bụ Soi Twilight ma ọ bụ Soi Pratuchai. Gaa na ogwe aka, nwata gosipụtara y streeper na ụdị ihe ahụ. N'ihe ka ukwuu, ihe niile na-eche maka njem nlegharị anya nke mba ọzọ. Ihe odide ala jupụtara na ọkụ neon n'ebe ọ bụla na ọtụtụ ndị mmadụ, yabụ eziokwu bụ na enweghị ike ileghara ebe a anya.
Ihe kacha mma bụ Thai na-eyi uwe dị ka ehi, ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ uwe anyị nwere ike ịsị. Otu n'ime ihe ngosi kachasị mma na-eme Kokmụaka Bangkok. Igba ọtọ? Enweta na anya? Nke a bụ Soi Twilight.
Na nkenke, gịnị ga-edo gị anya ma ọ bụrụ na ị ga-eme njem nleta nwoke nwere mmasị nwoke na Bangkok bụ na e nwere ebe atọ ị ga-eleta n'abalị ma ị nwere ike ịga leta ha niile n'otu ụbọchị ... ọ bụ ezie na m ga-ekpori ndụ ihe ọchị.
Silom Soi 4 ​​bụ n'okporo ámá nke ụlọ mmanya nwoke nwere mmasị nwoke, Silom Soi 2 n'okporo ámá nke gay discos na Soi Twilight n'okporo ámá nke mmekọahụ. Kedu ihe ị chọrọ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Bangkok » Ndụ kachasị mma nke nwoke nwere mmasị nwoke na Bangkok
Ihe 7 iji mee njem na Australia